विन्डोज ११ मा आधारित नयाँ ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ ? यी ल्यापटपमा आउनेछ अपडेट संस्करण - Technology Khabar
» ताजा समाचार » विन्डोज ११ मा आधारित नयाँ ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ ? यी ल्यापटपमा आउनेछ अपडेट संस्करण
विन्डोज ११ मा आधारित नयाँ ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ ? यी ल्यापटपमा आउनेछ अपडेट संस्करण
Technology Khabar १३ असार २०७८, आईतवार
माइक्रोसफ्टले हालसालै आधिकारिक रूपमा विन्डोज ११ घोषणा गरेको छ। माइक्रोसफ्टको नयाँ अपरेटिङ्ग प्रणाली यस बर्षको अन्त्यतिर आउँदैछ र यसको साथ मिल्दो प्रश्न आउँछ, कुन ल्यापटपले विन्डोज ११ लाई समर्थन गर्दछ र कुनले गर्दैन।
हालै डेल, एचपी, असुस जस्ता उत्पादकहरूले तिनीहरूका ल्यापटपहरू मध्ये कुनले विण्डोज ११ लाई समर्थन गर्दछ भन्ने जानकारी दिएका छन्।
एचपी र डेलले भनेका छन् कि उनीहरूको अधिकांश मेसिनहरू विन्डोज ११ को साथ उपयुक्त हुनेछन्, असुसले विन्डोज ११ लाई समर्थन गर्ने ल्यापटपहरूको पूर्ण सूची नै प्रकाशित गरेको छ।
त्यसैले आज हामी तपाईंलाई ती सबै कम्पनीहरूको ल्यापटपहरूको बारेमा कुरा गर्न खोज्दैछौं जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो।
असुसका यी ल्यापटप विन्डोज ११ युक्त हुने
विन्डोज ११ मा सुसज्जित असुस ल्यापटपहरुमध्ये- असुस प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ , प्रोआर्ट स्टुडियोबुक प्रो एक्स, प्रोआर्ट स्टूडियोबुक प्रो १५, प्रोआर्ट स्टूडियोबुक प्रो १५, असूस जेनबुक प्रो डुओ १५ ओएलईडी, जेनबुक प्रो डुओ, जेनबुक प्रो १४, जेनबुक प्रो१५ , जेनबुक ३ डीलक्स, जेनबुक एस, जेनबुक एस १३, जेनबुक फ्लिप एस, जेनबुक फ्लिप १३, जेनबुक फ्लिप १४, जेनबुक फ्लिप १५, जेनबुक फ्लिप १५ ओएलईडी, जेनबुक यूएक्स ३१०, जेनबुक यूएक्स ३११, जेनबुक १३ ओएलईडी, जेनबुक १३, जेनबुक यूएक्स ४१०, जेनबुक १४ , जेनबुक १४ अल्ट्रालाइट, जेनबुक डुओ, जेनबुक डुओ १४, ज़ेनबुक १५, भीभोबुक प्रो १५, भीभोबुक एस १३, भीभोबुक एस १४, भीभोबुक एस १५, भीभोबुक फ्लिप १२, वीवोबुक फ्लिप १४, भीभोबुक फ्लिप १५, भीभोबुक १४ समावेश छन् ।
यी एचपी ल्यापटपहरूमा सपोर्ट हुने
अर्कोतर्फ एचपीका ल्यापटपहरू, पीसीहरू र वर्कस्टेशनहरू पहिले नै शिपिङ्ग विन्डोज ११ को लागी तयार छ भनेर यकिन गरिएको छ। कम्पनीले अब विन्डोज ११ कम्प्याटिबिलिटीका लागि बिभिन्न उपकरणहरु जोड्न थाल्ने बताएको छ। नयाँ विन्डोज ओएस ल्यापटपको एचपी स्पेक्टर, एचपी एनभी र एचपी पभेलियन दायरामा उपलब्ध हुनेछ। नयाँ एचपी ओमेन र एचपी भिक्टस दायराले विन्डोज ११ कम्प्याटिबिलिटी पनि पाउनेछ। एचपीले उल्लेख गरेअनुसार एचपी एलिट र एचपी प्रो पोर्टफोलियोबाट चयन गरिएका एसकेयूहरू, एचपी एलिट ड्र्यागनफ्लाई जी २ सहित, विन्डोज ११ लाई पनि समर्थन गर्दछ।
अर्कोतर्फ, डेलले विन्डोज ११ सँग मिल्दो डिभाइसहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छैन, तर यसको अधिकांश ल्यापटपहरू विन्डोज ११ मा अपडेट हुने बताएको छ। डेलले भने, “अहिले पनि ग्राहकहरूले विश्वासको साथ डेलका पीसीहरू किन्न जारी राख्न सक्छन्। डेल डट कममा रहेका सबै विन्डोजमा आधारित डेल पीसीहरूले विन्डोज ११ प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन् र यो उपलब्ध भएपछि नि:शुल्क अपग्रेडको लागि योग्य हुनेछन्।”
प्रकाशित: १३ असार २०७८, आईतवार